tsipika famokarana zezika voajanahary. - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Manome zezika voajanahary amin'ny tany ny zezika biolojika granular, ka manome otrikaina ny zavamaniry ary manampy amin'ny fananganana rafi-tany mahasalama. Ny zezika biolojika dia mirakitra fahafaha-manao asa goavana Miaraka amin'ny famerana tsikelikely sy ny fandrarana ny fampiasana zezika any amin'ny ankamaroan'ny firenena sy ny sampana mifandraika amin'izany, ny famokarana zezika biolojika dia ho fotoana lehibe ho an'ny orinasa.
Ny zezika biolojika granular dia matetika ampiasaina hanatsarana ny tany sy hanome otrikaina amin'ny fitomboan'ny voly. Izy ireo koa dia mety ho lo haingana rehefa miditra amin'ny tany izy ireo, mamoaka haingana ireo otrikaina. Satria ny zezika biolojika mivaingana dia alaina amin'ny taha miadana kokoa, maharitra kokoa noho ny zezika biolojika ranoka izy ireo. Ny fampiasana zezika biolojika dia nampihena be ny fahasimban'ny zavamaniry sy ny tontolon'ny tany.
Ny ilàna famokarana zezika biolojika vovoka ho zezika biolojika granular:
Ny zezika vovoka dia amidy am-be hatrany amin'ny vidiny mora kokoa. Ny fanodinana bebe kokoa ny zezika biolojika vovoka dia afaka mampitombo ny lanja ara-tsakafo amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo akora hafa toy ny asidra humic, izay mahasoa ny mpividy mba hampiroborobo ny fitomboan'ny atin'ny sakafo mahavelona sy ny mpamatsy vola hamidy amin'ny vidiny mirary sy mendrika kokoa.
Drafitra famokarana zezika biolojika granular: mampihetsi-po - granulation - manamaina - mangatsiaka - sieving - fonosana.
Omeo dingana-pamokarana isan-karazany ny tsipika famokarana zezika voajanahary mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa, ary mora ampiasaina ny fitaovana.
1. Atsofohy ary asio granulate
Mandritra ny dingam-pihetsiketsehana, ny zezika vovoka dia afangaro amin'ireo akora na raikipohy maniry mba hampitombo ny sandan'ny sakafo mahavelona. Avy eo, ampiasao zezika zezika biolojika vaovao hanamboarana poti-javatra ny fangaro. Ny granulator zezika biolojika dia ampiasaina hanamboarana sombin-tany tsy misy vovoka amin'ny habe sy endrika azo fehezina. Ny granulator zezika biolojika vaovao dia mandray dingana mihidy, tsy misy fivoahan'ny vovoka ary tsy mamokatra be.
2. Maina sy mangatsiaka
Ny dingan'ny fanamainana dia mety amin'ny zavamaniry rehetra izay mamokatra akora matevina sy vovoka. Ny fanamainana dia afaka mampihena ny atin'ny hamandoan'ny zezika biolojika vokatr'izany, mampihena ny hafanan'ny hafanana hatramin'ny 30-40 ° C, ary ny tsipika famokarana zezika voajanahary dia mandray soloina fanamainana sy volo.
3. Fanaraha-maso sy fonosana
Aorian'ny granulation, ny zezika zezika biolojika dia tokony hovaina mba hahazoana ny haben'ny sombin-javatra ilaina ary esory ireo potika izay tsy mifanaraka amin'ny haben'ny sombin-vokatra. Ny milina sivana roller dia fitaovana sieving mahazatra, izay ampiasaina indrindra amin'ny fanasokajiana ny vokatra vita sy ny fanamorana ny vokatra vita. Aorian'ny sieving, ny zaridaina sombin-javatra zezika zezika voajanahary dia nolanjaina sy afangaro amin'ny alàlan'ny milina famonosana mandeha ho azy entin'ny mpampita fehikibo.